Mamahana Bilaogy Hanatsarana Ny Tontolo Iainana Ao Kambodza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Janoary 2018 15:44 GMT
Fantaro i Zarah Jane Almeida, mpamokatra Fandaharan'Onjampeo Mampiroborobo Ny Tontolo Iainana antsoina hoe Mlup Baitong. Mamahana bilaogy momba ny asany sy ny fiainany tao amin'ny Sreisaat Adventures tany Kambodza izy nanomboka tamin'ny volana Janoary 2004. Teraka tao an-tanàndehiben'i Roxas, izay fantatra amin'ny anarana hoe ilay renivohitry ny karaza-trondron-dranomasina any Filipina, nahazo mari-pahaizana tamin'ny seraseran'ny fampitam-baovao tao amin'ny Oniversiten'i Filipina izy. Nifindra tany Kambodza izy tamin'ny volana Aprily 2000 .
Ny hamaha ny olana momba ny fandripahana ala ao Kambodza, izay mifantoka amin'ny fanabeazana ny vahoaka amin'ny fiarovana ny harena voajanahary ny iraka nataon'i Mlup Baitong. Ny tenako no mitantana ny famokarana manontolo ny fandaharana tao amin'ny onjampeo, manatrika ny fivoriana momba ny famokarana ary mitarika ny fampiofanana anatiny ho an'ny mpiasan'ny fandaharan'ny onjampeo ao an-toerana mba hahafahan'izy ireo mandimby ahy. Sarotra ny nianatra ny fiteny tamin'ny voalohany! Mahafinaritra ahy ny miara-miasa amin'ireo mpiara-miasa amiko ankehitriny, mivezivezy, mikaroka tantara, manadihady ny olona ary mihaino ny tantaran'izy ireo ary mifanakalo resaka amin'izy ireo fotsiny. Na dia hafa mihitsy aza ny kolontsaiko dia tsy nanakana ny asako izany fa tombontsoa ho ahy .
Rehefa vita ny fandefasana ny fandaharana dia havaozina indray ny fitaovana ary zaraina ho an'ny fandaharan'ny pagoda any amin'ny faritany mandritra ny andro masina. Mandefa izany amin'ny alàlan'ny rafitra efa tranainy ao amin'ny pagoda, misy fandraketa-peo kasety mifandray amin'ny fanamafisam-peo ny moanina. Manampy anay amin'ny fanabeazana momba ny tontolo iainana sy ny asan'ny fanandrata-teny izy ireo. Nanoratra momba ity fandaharana ity aho tao amin'ny bilaogiko ary nandefa sary tao amin'ny flickr .
Nomena fakantsary nomerika ihany koa ny komitin'ny Vondrom-piarahamonina Mpitantana ny Ala mba hanampiana azy ireo amin'ny fanadihadiana ireo hetsika tsy ara-dalàna izay hatrehany mandritra ny fanaraha-maso ataon'izy ireo tsy tapaka ao anaty ala. Porofo tena manan-danja amin'ny fitadiavana fanampiana ny sary rehefa manoratra tatitra ho an'ny manampahefana ao an-toerana ny mpikamban'ny komity na ho an'ny fikambanana. Nomena fampiofanana amin'ny fahaiza-manao fototra momba ny solosaina sy ny fahaizana miteny Anglisy ireo komity ao amin'ny Vondrom-piarahamonina Mpitantana ny Ala sy ny Tetikasan'ny Fizahantany Maitso .
Nanomboka ny bilaogiko aho mba hifandraisako matetika amin'ny fianakaviana, havana ary namana avy lavitra. Tiako ho fantatr'izy ireo ny momba ny asako eto Kambodza, sy ny fiainana eto amin'ny ankapobeny. Nanasa ahy hamahana bilaogy ilay namako Indoneziana. Nampianatra ahy ny fomba hanombohana ny bilaogy sy nandefa sary tamin'ny alàlan'ny fifanakalozan-kevitra antserasera izy.
Rehefa nanomboka nahazo mpitsidika maro aho dia nilaza hoe maninona moa aho raha mamahana bilaogy bebe kokoa momba ny asako miaraka amin'i Mlup Baitong ? Na dia natokana ho an'ny fianakaviako sy ny namako aza ny bilaogiko, dia nahazo aingam-panahy hamaky ireo fanehoan-kevitra avy amin'ireo mpitsidika aho izay milaza fa nahafantatra zavatra samihafa bebe kokoa izy ireo momba ny tontolo iainana tao Kambodza.